About Us - China Kanaif muridzo unoridzirwa Systerm Ltd
Nyore kufurirwa Iron Fittings
Male Female zvigadziko
omarara akabatanidzwa pamwechete
Grooved Concentric yokuderedza
Carbon Steel Pipe munyatso
K & F ndiyo pfupi kuti "Key uye Makasimba", iro rinomiririra kiyi uye kusimba. Kunyange zvibereko K & F inongova unimpressive youinjiniya zvikamu, ivo unokosha zvinoriumba. Somunhu kushandiswa mutopota zvakakodzera nokutengesa, K & F yave maererano chigadzirwa unhu sezvo ayo hwaro ezvinhu nokuda apone kubva kwayo pakagadzwa zana uye kuedza kubereka zvigadzirwa akakwana, richipa yepamusoro mutopota Fittings kuti vatengi.
K & F kuti basa iri "To kuumba kunzwa nani kumba"! K & F anoramba kuva wakasununguka, kwezvakatipoteredza, simba-okuponesa, wakachengeteka uye yakakodzera zvigadzirwa, kuitira kupa yoku- uye tsika nani uye mararamiro vanhu uyewo aivabatsira zviuru zvemhuri vanakidzwe noupenyu hunofadza. Zvichakadai, K & F achaita nani kudzorera vashandi vayo, vadyidzani, shareholders uye nzanga. Zvisinei, K & F anoziva zvakajeka kuti chete kana manzwiro vatengi 'pamba kuva nani, unogona kuva zvebhizimisi kukura zvakanaka, saka kuti pemanzwiro zvedu pamba zvichava nani uyewo!
▪Vision pamusoro K & F-To kuva vanoremekedzwa vomuzana zvazvingava vachida! 1. Anonyatsoratidza ita munzanga basa uyewo mukanyatsochengeta kuzadzikisa uye kuedza transcend chigadzirwa kuita, mushandi basa, kwezvakatipoteredza kuita, mutero kuita zvichingodaro; kugara nokutonga kutenda kwakanaka, magariro netsika uye mabhizimisi tsika; nokushingaira basa pachena zvakanaka kosi; 2. Standard Hurumende mashandiro, vakakura uchishandisa zvakanaka, chakanakisisa mabhizimisi kuita uye hunoshamisa mudonzvo chikwata; kuva muenzaniso uye muenzaniso Chinese emakambani; 3. Kusika zvizivikanwe Chinese moto kuzvidzora zvinhu uye dzakawanda akakurumbira nenyere kubatana muchiso yokutanga; 4. Kuita hwina-zvisamumirira pamwe kufanana mapato: kugutsa vatengi, vashandi, vadyidzani, nharaunda uye shareholders.
▪Values ​​pamusoro K & F-Products, tsika kambani uye unhu. K & F haafaniri chete kupa kwazvo zvigadzirwa kuti vatengi, asi vanofanirawo kuva vanoremekedzwa kambani. Uyezve, K & F vanofanira kubatsira vashandi vayo kuwana kugona, kuvimbika uye kubudirira, saka kuti zvigadzirwa, tsika kambani uye unhu kuchaita vanoumba K & F muchiso, kutsivira mumwe uye hapana chinogona kupiwa pamwe. Chete kana ivo vatatu vanosimudzira mumwe anogona basa uye zvakaratidzwa K & F kuzadzikwa.
▪Spirit pamusoro K & F-Kuzvitsaurira, kubatsirana uye kudzidza. Innovative kuzvitsaurira nokutonga maitiro; kuzvitsaurira nheyo yokupona; kuzvitsaurira simba pfungwa basa, entrepreneur mweya uye pfungwa basa; kuzvitsaurira kuramba mediocrity kudzingana kunaka; kuzvitsaurira kuita zvakanakisisa kana iwe vanopiwa chinhu uye kuedza kuita zvakarurama chinhu chakanakisisa nzira kana usina basa chinhu. Kubatsirana, sezvo zita rayo rinoreva, zvinoreva mushandirapamwe, iyo inoreva LEVEL pamwe uye zvakanaka pamwe. Kudzidza kunofanirwa kuitira kurarama uye kukura, inova nezvaidiwa yaitonga uye rine utsanzi. Vashandi vanofanira kudzidza-mhando individualizes, apo K & F inofanira kuva sangano kudzidza vaifarira. Innovation ndiwo upenyu ane zvebhizimisi uye kunobva makwikwi uyewo chaiyeiye chinangwa pakudzidza. K & F inokurudzira kupfimbwa kuvandudza uye chero kujairika asi chinoshamisa kufunga; K & F chinokurudzira rokusika Vachitevedzera uye zvayakawana yepakutanga. K & F vanofanira kuchengeta vachiramba pacharo, kuti kunda pacharo nani.
▪Company Philosophy: 1. Style pamusoro K & F: Rapid mhinduro uye chakatanga kuitwa! K & F anoramba tuzvikonzero. Munhambo uyu hwokumhanyamhanya, "nokunonoka" zvinoreva chimwe chinhu asi "kumirira rufu". Saka chii tiri vakamirira? 3. Three anoranga nokuda K & F: No emazano okunyengera; hapana opportunism; hapana kubiridzira ari basa uye zvinhu! Izvi anoranga zvitatu unbridgeable mitsetse yambiro matatu, iyo ndiyo inokosha zvinodiwa pamusoro nenyanzvi tsika pakati K & F kuti vashandi, zvinodiwa zvinokosha unhu uye zviri zvinokosha kuvimbika. 3. Three kutonga dzekuziva kuti achiitisa: kana mufambiro zvinobatsira zvebhizimisi kukura; kana mufambiro iri inosimudzira vachisimudza vatengi 'akavimbika; kana mufambiro iri nyasha vakadengezera zvinhu nerimwe bato. 4. Kufunga kwadzinoita K & F: Tiri kunobva zvose! 5. K & kutenda F kuti: Tiri yakanakisisa! 6. K & F kuti vanoshanda mafungiro: Ita zvatinogona pamwe rizere chido! 7. K & F kuti chikwata pfungwa: K & F ndiye chikwata chimwe uye pane chete "isu", asi hapana "iwe" kana "Ivo"!